Ny sendikan'ny fitaterana eropeana dia mitaky ny fenitra iasana ambany indrindra ao Lufthansa
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny sendikan'ny fitaterana eropeana dia mitaky ny fenitra iasana ambany indrindra ao Lufthansa
Airlines • Airport • Associations News • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny sendikan'ny fitaterana eropeana dia mitaky fari-piasa farany ambany indrindra ao amin'ny Vondrona Lufthansa
Zava-dehibe, ny mpiasa sy ny mpampiasa dia mila miara-mivoaka amin'ity krizy ity, ary noho izany dia tsy maintsy manao dinidinika ara-tsosialy aloha isika hiantohana ny fanatsarana ny famoronana orinasa vaovao sy ny tetezamita amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fanovana ilaina amin'ny fahitsiana sy ny fisokafana ifotoran'izany. fifanakalozan-kevitra.
Ny sendika dia maniry fenitra miasa mendrika ao amin'ny Vondrona Lufthansa.
Manitsakitsaka ny zon'ny mpiasa ny fenitra ambany amin'ny toe-piainana.
Ny fifaninanana anatiny ao Lufthansa dia mety ho voavaha amin'ny fampiharana ny fifanarahana iraisana.
Ny famaritana ny fenitra farafahakeliny momba ny toe-pahasalaman'ny olona miasa manerana ny Vondrona Lufthansa no dingana voalohany hampijanonana ireo hetsika fanariana sosialy mitohy izay mahamenatra ny orinasan-tseranana alemanina, saingy mahatanteraka izany, mandefitra ivelan'ny mpitatitra azy ireo.
Tamin'ny taratasy vao haingana natao ho an'ny filohan'ny Deutsche Lufthansa, Andriamatoa Carsten SPOHR, ny Federasiona Mpiasa momba ny fitaterana eropeana (ETF) manameloka ny fomba '' ambany kokoa ny fenitra ara-tsosialy sy ny asa ho an'ny mpiasa '', izay Vondrona Lufthansa ny fitantanana dia manohy mampihatra am-pitandremana amin'ny asany Eurowings Discover. Mino ny Vondrona fa ny hetsika toy izao no hany vahaolana haingana sy azo atao hiatrehana ny fanerena ara-toekarena eo amin'ny tsena ankehitriny, izay nolavin'ny ETF.
Raha ny filazan'ny mpiara-miasa amin'ny ETF - Kapers (Suisse), Vida (Austria), Aircrew Alliance ary ver.di (Alemana) ary B.United (Repoblika Czech) - ity vahaolana ity dia miteraka antsoina hoe "kanibalisme ao anaty vondrona", ary manohana hazakazaka hatrany amin'ny farany ambany. Mandritra izany fotoana izany ny fenitra ambany amin'ny toe-piainan'ny asa napetraky ny ankamaroan'ny kaompaniam-pitaterana vola kely any Eropa dia manitsakitsaka fatratra ny zon'ny mpiasa, ary ny vondrona dia mihazakazaka amin'ny finoana mitovy amin'izany. Izany no antony nangatahan'ny Federasiona Mpiasa momba ny fitaterana eropeana sy ny mpiara-miasa aminy tsy tokony hatao ho toy ny drafitra ho an'ireo orinasa vaovao, toy ny tranga ao amin'ny Eurowings Discover, ilay orinasam-pitaterana vaovaovao vao manomboka miasa ao anatin'ny Lufthansa Group farany volana.
Fa kosa, heverinay fa ny fifaninanana anatiny ao anatin'ny vondrona Lutfhansa dia mety ho voavaha amin'ny alàlan'ny fampiharana ny fifanarahana iraisana ao amin'ny Eurowings Discover, ary io maodely fampiharana io dia tokony hampiharina bebe kokoa amin'ny asa eropeana rehetra. Ireo sendika misolo tena ny mpiasa ao amin'ny Vondrona Lufthansa sy ny ETF - misolo tena ireo mpiasa mpitatitra 5 tapitrisa ao Eropa sy ny any ivelany - dia mihevitra fa ny dingana voalohany amin'izany lalana izany dia:
mamerina ny fifanakalozan-kevitra ara-tsosialy amin'ny mpitatitra rehetra izay tsy miasa izany, ao anatin'izany ny Eurowings Discover sy
mahita ny marimaritra iraisana amin'ny fametrahana fenitra farafahakeliny mikasika ny toe-pahasalaman'ny mpiasa an'arivony ao amin'ny Vondrona Lufthansa izay tsy manana fifanarahana iraisana.
Eoin Coates, Head of Aviation ao amin'ny ETF dia nanambara:
'' Zava-dehibe, ny mpiasa sy ny mpampiasa dia mila miara-mivoaka amin'ity krizy ity, ary noho izany dia mila manao dinidinika ara-tsosialy mialoha isika mba hahazoana antoka fa hamboarina tsara ireo fikambanana vaovao sy ny tetezamita amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fanovana ilaina miaraka amin'ny fahamarinana sy ny fisokafana ifotony. ny dinika toy izany. ''
Ny ETF sy ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny Vondrona Lufthansa dia mangataka amin'ny ekipa mpitantana ny orinasam-pitaterana an'habakabaka rehetra miasa ao anatin'ny Vondrona Lufthansa hamerina ny dinika sosialy miaraka amin'ireo sendika solontena amin'ny fomba mirindra, mahomby ary maharitra. Izany dia ho famantarana mazava fa ny Lufthansa Group dia tena mandray fepetra mivaingana hanovana ny lalana diso tanteraka izay raisin'ny vondrona amin'ny fanapaha-kevitra handroaka ny fenitra ara-tsosialy sy ny asa ho an'ny mpiasan'izy ireo amin'ny orinasa vaovao.